အမြင်အာရုံပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် ခေါင်းကိုက်တာကို ရှောင်ရှားဖို့အတွက် မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်း (၇) ခု - Lifestyle Myanmar
Home Uncategorized အမြင်အာရုံပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် ခေါင်းကိုက်တာကို ရှောင်ရှားဖို့အတွက် မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်း (၇) ခု
အမြင်အာရုံပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် ခေါင်းကိုက်တာကို ရှောင်ရှားဖို့အတွက် မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်း (၇) ခု
ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ သင့်မျက်လုံးတွေနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား? ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ တစ်ခုခုကို အချိန်အကြာကြီး အာရုံစိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်အာရုံဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာပြီး ခေါင်းကိုက်တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သတိမထားဘဲနေမယ်ဆိုရင် အချို့သောအကျိုးဆက်တွေများစွာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းကိုက်လာမှ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်မယ့်အစား သင့်အမြင်အာရုံအတွက် မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေက ခါင်းကိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်သလို၊ မျက်လုံးညောင်းညာတာတွေကိုလည်း သက်သာစေမှာပါ။
၁။ လေ့ကျင့်ခန်း (၁)
ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီး သင့်မျက်လုံးတွေကို ပိတ်ထားပါ။ တစ်မိနစ်လောက် အသက်ပြင်းပြင်းရှုရှိုက်ပါ။ သင့်လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကို နွေးသွားတဲ့အထိ ပွတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် သင့်ရဲ့ပိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးတွေပေါ်မှာ သင့်လက်ဝါးကို ညင်သာစွာ တင်ထားပါ။ သင့်လက်ဝါးက နွေးထွေးမှုဟာ မျက်လုံးသို့ ပြောင်းသွားတာကို ခံစားရမှာပါ။ ဒီအတိုင်းပဲ ၃ကြိမ်လောက်ပြုလုပ်ပေးပါ။
၂။ လေ့ကျင့်ခန်း (၂)
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ မကြာခဏ မျက်တောင်ခတ်ဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ မျက်တောင်မခတ်တာ ကြာလာတဲ့အခါ မျက်လုံးက ရေဓါတ်ခန်းပြီ မျက်လုံးနီလာပါတယ်။ ပြီးနောက် ခေါင်းကိုက်တာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မျက်တောင်ခတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
ပထမဆုံး မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ပြီး ခုံမှာထိုင်ပါ။ ၁၀ကြိမ်လောက် မျက်တောင်ကိုလျှင်မြန်စွာခတ်ပါ။ မိနစ် ၂၀လောက် သင့်မျက်လုံးတွေကို ပိတ်ထားပါ။ အသက်ဝဝရှုပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို ၅ကြိမ်လောက် ပြန်လုပ်ပါ။
၃။ လေ့ကျင့်ခန်း (၃)
ထိုင်ပြီး သင့်လက်တစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်းထားပါ။ လက်သီးဆုပ် လက်မထောင်ပြီး သင့်လက်ချောင်းကို ၁၀ စက္ကန့်လောက် အာရုံစိုက်ပေးပါ။ သင့်လက်ကို ဖြေးညင်းစွာ ဘယ်ဘက်သို့ ရွေ့ပါ။ သင့်မျက်လုံးတွေက လှုပ်ရှားမှုနောက်ကို လိုက်ပါ။
သင့်လက်မောင်းကို ညာဘက်သို့ ဆန့်ကျင့်ဘက် direction ကို ရွှေ့ပါ။ direction တစ်ခုစီကို ဒီလှုပ်ရှားမှု ၅ကြိမ်စီပြုလုပ်ပေးပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပြီးရင် သင့်မျက်လုံးတွေကို ၃မိနစ်လောက် ပိတ်ထားပါ။
၄။ လေ့ကျင့်ခန်း (၄)
ခါးကိုမတ်မတ်ထိုင်ပြီး သင့်ဒူးတွေကို ပူးကပ်ထားပါ။ သင့်ဒူးတွေပေါ်မှာ သင့်လက်သီးတွေ တင်ထားပါ။ မျက်လုံး Level ရောက်တဲ့အထိ သင့်ညာဘက်လက်မကို ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ပါ။ ပြီးနောက် သင့်ခေါင်းကိုမော့ပါ။ ပြန်ငုံ့ပါ။ တစ်ခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ ပြန်လုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ သင့်မျက်လုံးတွေကို ပိတ်ပြီး အနားပေးပါ။
၅။ လေ့ကျင့်ခန်း (၅)
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်ရပါမယ်။ မူးဝေတာတွေ ဖြစ်စေတာကြောင့် ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ရင် မကောင်းပါဘူး။
သက်တောင့်သက်သာထိုင်ပြီး သင့်နှာခေါင်းပွိုင့်မှာ သင့်လက်မကို ထားပါ။ မျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးက လက်မပေါ်မှာ တပြိုင်နက်တည်း အာရုံစိုက်ရပါမယ်။ သင့်လက်မကို သင့်နှာခေါင်းကနေ ဝေးသွားအောင် ရှေ့သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ပါ။ ပြီးနောက် သင့်ရဲ့အကြည့်ကို အနားပေးပြီး မျက်ခွံတွေကို မိနစ် ၂၀လောက် ပိတ်ထားပေးပါ။
၆။ လေ့ကျင့်ခန်း (၆)
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက မျက်လုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သက်သာစေပြီး စိတ်ကို relax ဖြစ်စေတာကြောင့် တစ်နေ့ကို ၁၀မိနစ်လောက် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဖွင့်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး အဝေးဆုံး အမှတ်ထိကြည့်ပါ။ ၂မိနစ်လောက် ပြုလုပ်ပေးပါ။
သင့်နှာခေါင်းပွိုင့်ပေါ်မှာ focus ထားပြီး မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအကွာအဝေးထိ သင့်အကြည့်တွေကို ပို့ပေးပါ။ မျက်တောင်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မြန်မြန်ခတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် relax လုပ်ပေးပါ။
၇။ လေ့ကျင့်ခန်း (၇)
သင့်နားထင်တွေကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းက အရမ်းလွယ်ပြီး relax ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအံသြစရာကုထုံးကို တစ်နေ့ ၁၀မိနစ်လောက် ပြုလုပ်ပေးပါ။
ခါးမတ်မတ်ထိုင်ပြီး အသက်ပြင်းပြင်းရှုရှိုက်ပါ။ ၆စက္ကန့်လောက် ရှုသွင်းပြီး ၇စက္ကန့် လောက် အသက်အောင့်ထားပြီး ၈စက္ကန့်လောက် ရှုထုတ်ပေးပါ။
လက်ညှိုး၊ လက်ခလယ်တစ်ဖက်စီနဲ့အတူ နားထင်ကို ၂မိနစ်လောက် နှိပ်ပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းကို နားပါ။
ဒီမျက်စိလေ့ကျင့်ခန်းတွေက အလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေတာကြောင့် နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးပါ။
အမွငျအာရုံပငျပနျးနှမျးနယျမှုနှငျ့ ခေါငျးကိုကျတာကို ရှောငျရှားဖို့အတှကျ မကျြလုံးလကေ့ငျြ့ခနျး (၇) ခု
ခေါငျးကိုကျခွငျးဟာ သငျ့မကျြလုံးတှနေဲ့ ဆကျစပျနိုငျတယျဆိုတာ သိပါသလား? ကှနျပြူတာ အသုံးပွုတဲ့အခါ၊ တဈခုခုကို အခြိနျအကွာကွီး အာရုံစိုကျတဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အမွငျအာရုံဟာ ပငျပနျးနှမျးနယျလာပွီး ခေါငျးကိုကျတာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ သတိမထားဘဲနမေယျဆိုရငျ အခြို့သောအကြိုးဆကျတှမြေားစှာ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျလာမှ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးသောကျမယျ့အစား သငျ့အမွငျအာရုံအတှကျ မကျြစိလကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှေ ပွုလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ ခါငျးကိုကျခွငျးကို ရှောငျရှားနိုငျသလို၊ မကျြလုံးညောငျးညာတာတှကေိုလညျး သကျသာစမှောပါ။
၁။ လကေ့ငျြ့ခနျး (၁)
ထိုငျခုံမှာထိုငျပွီး သငျ့မကျြလုံးတှကေို ပိတျထားပါ။ တဈမိနဈလောကျ အသကျပွငျးပွငျးရှုရှိုကျပါ။ သငျ့လကျဝါးနှဈဖကျကို နှေးသှားတဲ့အထိ ပှတျပေးပါ။ ပွီးရငျ သငျ့ရဲ့ပိတျထားတဲ့ မကျြလုံးတှပေျေါမှာ သငျ့လကျဝါးကို ညငျသာစှာ တငျထားပါ။ သငျ့လကျဝါးက နှေးထှေးမှုဟာ မကျြလုံးသို့ ပွောငျးသှားတာကို ခံစားရမှာပါ။ ဒီအတိုငျးပဲ ၃ကွိမျလောကျပွုလုပျပေးပါ။
၂။ လကေ့ငျြ့ခနျး (၂)
ကြှနျတျောတို့ဟာ ကှနျပြူတာရှမှေ့ာ မကွာခဏ မကျြတောငျခတျဖို့ မလြေ့ော့နတေတျကွပါတယျ။ မကျြတောငျမခတျတာ ကွာလာတဲ့အခါ မကျြလုံးက ရဓေါတျခနျးပွီ မကျြလုံးနီလာပါတယျ။ ပွီးနောကျ ခေါငျးကိုကျတာ ဖွဈလာပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မကျြတောငျခတျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးကို ပွုလုပျပေးရပါမယျ။
ပထမဆုံး မကျြလုံးတှကေို ဖှငျ့ပွီး ခုံမှာထိုငျပါ။ ၁၀ကွိမျလောကျ မကျြတောငျကိုလြှငျမွနျစှာခတျပါ။ မိနဈ ၂၀လောကျ သငျ့မကျြလုံးတှကေို ပိတျထားပါ။ အသကျဝဝရှုပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို ၅ကွိမျလောကျ ပွနျလုပျပါ။
၃။ လကေ့ငျြ့ခနျး (၃)
ထိုငျပွီး သငျ့လကျတဈဖကျကို ဆနျ့တနျးထားပါ။ လကျသီးဆုပျ လကျမထောငျပွီး သငျ့လကျခြောငျးကို ၁၀ စက်ကနျ့လောကျ အာရုံစိုကျပေးပါ။ သငျ့လကျကို ဖွေးညငျးစှာ ဘယျဘကျသို့ ရှပေ့ါ။ သငျ့မကျြလုံးတှကေ လှုပျရှားမှုနောကျကို လိုကျပါ။
သငျ့လကျမောငျးကို ညာဘကျသို့ ဆနျ့ကငျြ့ဘကျ direction ကို ရှပေ့ါ။ direction တဈခုစီကို ဒီလှုပျရှားမှု ၅ကွိမျစီပွုလုပျပေးပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးပွီးရငျ သငျ့မကျြလုံးတှကေို ၃မိနဈလောကျ ပိတျထားပါ။
၄။ လကေ့ငျြ့ခနျး (၄)
ခါးကိုမတျမတျထိုငျပွီး သငျ့ဒူးတှကေို ပူးကပျထားပါ။ သငျ့ဒူးတှပေျေါမှာ သငျ့လကျသီးတှေ တငျထားပါ။ မကျြလုံး Level ရောကျတဲ့အထိ သငျ့ညာဘကျလကျမကို ဖွညျးဖွညျးခငျြးရှပေ့ါ။ ပွီးနောကျ သငျ့ခေါငျးကိုမော့ပါ။ ပွနျငုံ့ပါ။ တဈခွားလကျတဈဖကျနဲ့ ပွနျလုပျပါ။ နောကျဆုံးမှာ သငျ့မကျြလုံးတှကေို ပိတျပွီး အနားပေးပါ။
၅။ လကေ့ငျြ့ခနျး (၅)
ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက တဈကွိမျသာ ပွုလုပျရပါမယျ။ မူးဝတောတှေ ဖွဈစတောကွောငျ့ ထပျခါထပျခါလုပျရငျ မကောငျးပါဘူး။
သကျတောငျ့သကျသာထိုငျပွီး သငျ့နှာခေါငျးပှိုငျ့မှာ သငျ့လကျမကို ထားပါ။ မကျြလုံးနှဈဖကျစလုံးက လကျမပျေါမှာ တပွိုငျနကျတညျး အာရုံစိုကျရပါမယျ။ သငျ့လကျမကို သငျ့နှာခေါငျးကနေ ဝေးသှားအောငျ ရှသေို့ ဖွညျးဖွညျးခငျြးရှပေ့ါ။ ပွီးနောကျ သငျ့ရဲ့အကွညျ့ကို အနားပေးပွီး မကျြခှံတှကေို မိနဈ ၂၀လောကျ ပိတျထားပေးပါ။
၆။ လကေ့ငျြ့ခနျး (၆)
ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက မကျြလုံးပငျပနျးနှမျးနယျမှုကို သကျသာစပွေီး စိတျကို relax ဖွဈစတောကွောငျ့ တဈနကေို့ ၁၀မိနဈလောကျ ပွုလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
ဖှငျ့ထားတဲ့ ပွတငျးပေါကျရှမှေ့ာ မတျတပျရပျပွီး အဝေးဆုံး အမှတျထိကွညျ့ပါ။ ၂မိနဈလောကျ ပွုလုပျပေးပါ။
သငျ့နှာခေါငျးပှိုငျ့ပျေါမှာ focus ထားပွီး မိုးကုတျစကျဝိုငျးအကှာအဝေးထိ သငျ့အကွညျ့တှကေို ပို့ပေးပါ။ မကျြတောငျကို အကွိမျပေါငျးမြားစှာ မွနျမွနျခတျပေးပါ။ ပွီးရငျ relax လုပျပေးပါ။
၇။ လကေ့ငျြ့ခနျး (၇)
သငျ့နားထငျတှကေို နှိပျနယျပေးခွငျးက အရမျးလှယျပွီး relax ဖွဈစပေါတယျ။ ဒီအံသွစရာကုထုံးကို တဈနေ့ ၁၀မိနဈလောကျ ပွုလုပျပေးပါ။
ခါးမတျမတျထိုငျပွီး အသကျပွငျးပွငျးရှုရှိုကျပါ။ ၆စက်ကနျ့လောကျ ရှုသှငျးပွီး ရစက်ကနျ့ လောကျ အသကျအောငျ့ထားပွီး ၈စက်ကနျ့လောကျ ရှုထုတျပေးပါ။
လကျညှိုး၊ လကျခလယျတဈဖကျစီနဲ့အတူ နားထငျကို ၂မိနဈလောကျ နှိပျပေးပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးကို နားပါ။
ဒီမကျြစိလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ အလှနျရိုးရှငျးပါတယျ။ မကျြလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈစတောကွောငျ့ နစေ့ဉျပွုလုပျပေးပါ။
Previous articleအခြားသူရဲ့ အမြင်မှာ ရွံစရာကောင်းပေမဲ့ သင့်အတွက်တော့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်
Next articleပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ ကလေးအလှဓာတ်ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါ
ကိုယျ့ရဲ့အိမျလေးကို သနျ့ရှငျးပွောငျလကျနတောမြိုး ဆန်ဒရှိပါက အမွဲကငျြ့သုံးရမယျ့ အလအေ့ထမြား
ခရီးသှားတှကေို နှိပျနယျပေးပွီး စှဲဆောငျတတျတဲ့ ဆငျလေးတှရေဲ့ နောကျကှယျက သနားစရာဝဋျကွှေး
ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ရဓောတျလုံလောကျမှုမရှိလြှငျ ဖွဈပျေါနိုငျတဲ့ ဆိုးကြိုး ၅မြိုး